OUAI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပင်ကိုယ်အနံ့လေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Rue St Honoré Eau de Parfum | CosmeticMyanmar
Home » Article » OUAI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပင်ကိုယ်အနံ့လေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Rue St Honoré Eau de Parfum
ဆံပင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ အများကြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ OUAI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပင်ကိုယ်အနံ့လေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Rue St Honoré Eau de Parfum လေးအကြောင်း Cosmetic Myanmar ရဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Fragrance just went global 🌎✈️! Shop them foralimited time at: 🇨🇦@sephoracanada 🇸🇬@sephorasg 🇬🇧 @cultbeauty, @theofficialselfridges, @debenhams & @harrods 🇩🇪 @nichebeautyofficial 🇨🇭 @jelmoli 🇧🇪 @findujour 🇩🇰 @magasindunord 🇮🇹 @50ml_milano 🇳🇴 @kochparfymeri.no
A post shared by OUAI Haircare (@theouai) on Nov 28, 2018 at 7:13pm PST
Brand တိုင်းမှာတော့ ကိုယ့် Brand နဲ့ တွဲပြီး တန်းမြင်စေနိုင်မယ့် အရာ တစ်ခုခုကတော့ အမြဲ မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်အောင် ရှိနေကျပါပဲ။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ OUAI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပင်ကိုယ်အနံ့လေးလို့ ဆိုပြီး လူကြိုက်များတဲ့ အနံ့လေးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဒီရေမွှေးလေးကတော့ OUAI ချစ်သူတွေတိုင်းကို စိတ်တိုင်းကျစေနိုင်မှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနံ့လေးကတော့ Quai တွေ အကြိုက်ဆုံး အနံ့လေး ဖြစ်သလို တစ်ခါ စွတ်ထားရင်လည်း မနက်ကစပြီး ညအထိတောင် သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့နဲ့ အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေမွေးလေး စွတ်ထားပြီးရင်တော့ လူတွေ ကြားထဲ သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက် အပြည့်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပြီး ချွေးနံ့တွေ နံနေမလား ။ ကိုယ့်ဆီက ချွေးနံ့တွေကြောင့် ဘေးကလူတွေ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေမှာ မျိုးကို လုံးဝ စိုးရိမ် စရာ မရှိတော့ပါဘူး ။
Why play favorites when you can have them all? 💫Shop them on @theouai .com, @sephora, #sephorainJCP & @urbanoutfitters. <#regram @pete__harrison>
ခါတိုင်း ထုတ်နေကျ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ၊ ကိုယ်လိမ်း အဆီတွေ ၊ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေမှာ ပါဝင်နေကျ အနံ့လေးတွေအတိုင်း Rue St Honoré Eau de Parfum ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ ဈေးနှုန်း အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၆ ဒေါ်လာလောက် ကျသင့်ပါတယ်။ ဒီရေမွှေးလေးရဲ့ အနံ့ကိုတော့ OUAI ရဲ့ အရောင်းရဆုံး ခေါင်းလိမ်းဆီရဲ့ အနံ့ကို ယူပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် OUAI ကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်း နှစ်သက်မယ့် ရေမွှေးလေးပဲ ဖြစ်လို့ ပြောပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
မနက်ခင်းလေး အစကနေပြီး တစ်နေကုန် အထိ ကိုယ်သင်းနံ့လေးနဲ့ မွှေးပျံ့နေဖို့အတွက်ကိုတော့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု တစ်ခု အနေနဲ့ရော Quai ရဲ့ ချစ်သူလေးတွေအတွက် နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များတဲ့အနံ့လေးနဲ့ ရေမွှေးကို အသုံးပြုကြည့်လို့ ရအောင်လို့ Cosmetic Myanmar က ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော်။